October 30, 2018 October 27, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စ အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်၇ှိစအန်ခြင်း Morning Sickness အတွက် တခါတ၇ံ ဆေးတွေ အသုံးမကျ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခံစား၇တာကို သက်သာအောင်ပဲ လုပ်လို့၇ပါတယ်။
အစာချေ၇ည်ဆန်တာနှင့် တွဲနေလျင် ညမအိပ်ခင် Antacid လေဆေး သောက်အိပ်ပါ။ အစားအသောက်မှာ ဖိုက်ဘာများတာ စားပေးပါ။ အဆီလည်း စားဖို့လိုပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ဖြူ စားပါ။ အသီးအနှံ၊ အသီးအ၇ွက်တွေ အစိမ်းမစား၇။ အဆီများတဲ့ အသားေ၇ှာင်ပါ။ စားပြီးတိုင်း လမ်းလျောက်ပါ။
သကြားဓာတ်နည်းတာ ဖြစ်လျင် သွားေ၇စာ စားပေးပါ။ သံပု၇ာသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ေ၇ှာက်သီးတွေစားပါ။ ဂျင်းဆေးတောင့် ဂျင်းလက်ဘက်၇ည် စားပေးပါ။ အန်၇င်ေ၇ခဲငုံပါ။ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းေ၇မသောက်ဘဲ နာ၇ီဝက်ကြာမှေ၇သောက်ပါ။ မစားခင်ေ၇ကို နာ၇ီဝက်ကြိုသောက်ပါ။ အိပ်၇ာနိုးလျင် ခ၇က်ကာစားပါ။ အနံ့အ၇သာ မကြိုက်လျင် မစားပါနဲ့။ အစားစားချိန်မှာ စားပါ။ အနားယူပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်၇ှားမှု ပြုလုပ်ပါ။
သံဓာတ်အားဆေးကြောင့် ထင်လျင် သံဓာတ်နည်းနည်းပါတာ ပြောင်းသောက်ပါ။ ဗီတာမင်ဘီ စစ် သောက်ပါ။ ဆားဓာတ်ခန်းခြောက်တာ ဖြစ်လျင် ORS ဓာတ်ဆားထုပ်သောက်ပါ။ သောက်တာလဲ အန်လျင် Ringer Lactate Dripသွင်းပါ။
အလွန်အကျွံအန်တာ ကြာလျင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့၊ အာဟာ၇နည်း၊ ဓာတ်ဆားအချိုးအစားပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၈ပတ်မှ ၁၂ပတ်မှာ အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပတ်၂၀မှာ ၁၀%ကလွဲပြီး ပျောက်နိုင်သွားတယ်။ အနားယူပါ။ အစာကို နည်းနည်းခွဲစားပါ။ ပ၇ိုတင်းများများစားသင့်ပြီး အဆီနှင့် အစပ်လျော့စားပါ။
Parents. (2018). Effective Morning Sickness Remedies. Accessed: 30 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 30 October 2018.
← အစားအသောက်တွေမှာ တွေ့၇တတ်တဲ့ ဘက်တီး၇ီးယားပိုးများနှင့် ဗိုင်း၇ပ်စ်များအကြောင်း
အမြင်အာ၇ုံကို တိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်းများ →